Ala nri Mechanical chọrọ Solid-Liquid Separator Machine Suppliers na Factory | YiZheng
Na Ọchịchọ nsị Solid-mmiri mmiri separator tumadi emeso n'efu na mmiri ọdịnaya nke ihe karịrị 90%, ọ bụ a ọhụrụ ụdị nke elu mma akụrụngwa tumadi-eji nzacha nri dị ka ezi, ehi, ọkụkọ, atụrụ na ụdị nile nke nnukwu na-ajụ-sized anụ ụlọ. Enwere ike iji ya na akpịrị ịkpọ nkụ nke nnukwu mmiri dị na mmiri, dị ka ahịhịa bean, na nnukwu mmiri nke mmanya mmanya.
Kedu ihe bụ nkewa mmiri mmiri nke nwere mmasị?
Ọ bụ ngwa ọrụ nchekwa gburugburu ebe obibi maka nsị nsị anụ nri ọkụkọ. Ọ nwere ike ikewapụ nsị na nsị nsị anụ na mkpofu anụ ụlọ n'ime fatịlaịza organic na fatịlaịza organic siri ike. Enwere ike iji fatịlaịza mmiri nwere ike iji mee ihe maka ihe ọkụkụ mgbe gbaa ụka, ma nwee ike iji fatịlaịza siri ike mee ihe na mpaghara nke enweghị fatịlaịza nke nwere ike imezi usoro ala. N'otu oge, ọ nwekwara ike mere organic onyinye fatịlaịza. A na-eji mgbapụta mmiri na-akwado mmiri iji zipu mmiri nsị nke mbụ na onye na-ekewapụ ihe, na ihe siri ike (nri akọrọ) na-apụ apụ ma kewapụ ya site na gburugburu ebe a na-etinye na ihuenyo ahụ, mmiri ahụ na-asọpụkwa site na ntanye ahụ.
Nhazi nke Sieve Sieve Type Solid-liquid Separator
Na Ọchịchọ nsị Solid-mmiri mmiri separator A na-ejikarị sieve, winch gburugburu na gburugburu agụba, nke a na-eji 304 igwe anaghị agba nchara na alloy eme ihe mgbe usoro pụrụ iche gasịrị. Ọ nwere ezigbo nguzogide corrosion na iyi eguzogide. O nwere oge 2-3 nke ebuli ọrụ jiri ya tụnyere ngwaahịa ndị yiri ya.
Njirimara nke Ezigbo Sieving Solid-liquid Separator
The ọnọdụ ọrụ nke mmasị sieve siri ike-mmiri mmiri separator zuru ezu na ezubere iche. Ọdịdị igwe niile na-ejikọta usoro nsị nsị anụ, sistemụ vibration, sistemụ extrusion na sistemụ akpaka akpaka, nke na-eme ka ikike ọgwụgwọ na ọgwụgwọ pụta ihe.
1. Obu ọgbọ ohuru n’efu mkpofu ahihia.
2. Ọma ịgwọ nri nsị si anụ ụlọ na ulo ozuzu okuko maka nkewa-mmiri mmiri nkewa.
Uru nke Ezigbo Sieving Solid-liquid Separator
1.It nwere ọrụ nke sorting na nzacha nnukwu iberibe mbụ, na-agwakọta multiple ọrụ dị ka nnyefe, na ịpị, akpịrị ịkpọ nkụ na ájá mwepụ na-edozi nsogbu nke ahihia asọfe ngwá na airtight ọrụ
2.The nkewa ọnụego nke sere n'elu, kwụsịtụrụ okwu na sedimenti na n'efu bụ ihe karịrị 95%, na ihe siri ike ọdịnaya nke n'efu bụ karịa 35%.
3.It nwere akpaka mmiri mmiri larịị akara ọrụ, nke na-azọpụta ihe karịrị 50% nke ike oriri karịa yiri ngwá, ala na-arụ ọrụ na-eri.
4. Akụkụ nke akụrụngwa na kọntaktị na nhazi ahụ bụ nke igwe anaghị agba nchara ma jiri ya na-ebugharị ya.
Ọchịchọ siri ike nke mmiri mmiri nkewapụta vidiyo
Ebumnobi Sieving Solid-mmiri mmiri separator Model Nhọrọ
Ihe bụ isi bụ:
Ike (m³ / h)
Ọnụ ọnụego Slagging-off
Nke gara aga: Static Fatịlaịza batching Machine
Osote: Organic fatịlaịza mmepụta akara
Okwu Mmalite Gịnị bụ Loading & Inye Nri igwe? Ojiji nke itinye na igwe nri dị ka ụlọ nkwakọba ihe na usoro nke fatịlaịza na nhazi. Ọ bụkwa ụdị nke nnyefe ngwaọrụ maka nnukwu ihe. Ngwa akụrụngwa a enweghị ike ibunye ezigbo ihe nwere oke ihe pere mpe karịa 5mm, kamakwa nnukwu ihe ...
Okwu Mmalite Gịnị bụ Akpaaka Nkwakọ ngwaahịa? A na-eji Machine Packaging maka Fatịlaịza na pellet fatịlaịza, ezubere maka ịhazi ihe. Ọ gụnyere ụdị ịwụ abụọ na otu ụdị ịwụ. Igwe ahụ nwere njirimara nke arụmọrụ dị mfe, ntinye dị mfe, nhazi dị mfe, na ezigbo hig ...